अन्तरवार्तामै अमृतको जेठी श्रीमतीको फोन आएपछि यसरी अमृतको झु’ठको पोल खुल्यो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
अन्तरवार्तामै अमृतको जेठी श्रीमतीको फोन आएपछि यसरी अमृतको झु’ठको पोल खुल्यो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
December 13, 2020 December 19, 2020 AdminLeaveaComment on अन्तरवार्तामै अमृतको जेठी श्रीमतीको फोन आएपछि यसरी अमृतको झु’ठको पोल खुल्यो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
सामाजिक संजालमा चिनेको भरमा विवाह गर्दा महिलाहरुको बिचल्ली हुने गरेको घ’टना नौलो हैन । यस्तै श्रीमान पिडित प्रतिमा अधिकारीको श्रीमान अमृत परियारले ग’र्भवती बनाएर छोडेर हिडेको भन्दै मिडियामा आएपछि यो विषय चर्चामा छ । आफ्नो श्रीमतीको बिलौना संचारमाध्यममा देखेपछि अमृत पनि मिडियाको सम्पर्कमा त आए तर उनले गल्ति भने श्रीमती कै भएको बताए ।
अमृतले जेठी श्रीमतीसंग सम्बन्ध बिच्छेद गरिसकेको र त्यसपछि मात्र प्रतिमा अधिकारीसंग विवाह गरेको बताउदै आएपनि उनको जेठी श्रीमती सुनिता नेपालीसंग सम्बन्ध बिच्छेद नभएको खुलेको छ । तर अमृत मिडियामा आउन थालेपछि जेठी श्रीमती सुनिता नेपाली पनि मिडियाको सम्पर्कमा आएर यसको दावी गरेकी हुन् । सुनिता नेपालीले आफ्नो सम्बन्ध बिच्छेद नभएको समेत बताएकी छन ।
त्यति मात्र हैन अमृतको अन्य युवतीहरुसंग पनि सम्बन्ध रहेको हुन सक्ने उनको श्रीमतीहरुले बताएका छन । उनले काठमाडौँ बस्दा एक तामाङ थरकी युवतीसंग पनि विवाह गरेको अमृतले स्वीकारेका छन । पछिल्लो भिडियो अपडेट हेर्नुहोस :
साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस : मंसिर २८ गते आईतबार देखि पौष ०४ गते शनिबारसम्मको
लकडाउनमा एम्बुलेन्स भित्र यस्तो देखेपछि प्रहरी नै छक्क ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज हुँदै: असार १ गते देखि खुकुलो हुँदै ! पहिलो चरणमा यी क्षेत्र खुल्दै…..
रमेश प्रसाईसँग विवाहको ह’ल्लापछि चर्चामा आएकी गायिका कल्पना दाहालले पनि गरिन् विवाह ! तर रियलमा हैन, हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….